Ha'yadda Daryeelka Bulshada oo Qoysas Rashin ugu qaybisay Garoowe(SAWIRO) – SBC
Ha'yadda Daryeelka Bulshada oo Qoysas Rashin ugu qaybisay Garoowe(SAWIRO)
Posted by editor on Agoosto 26, 2011 Comments
Qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada garoowe ee caasimada Puntland waxaa la gaar sii yay deeq gar gaar ah oo ka timid dowlada dalka kuwayt.
Deeqda ayaa waxaaaanta oo jimca ah waxaa loo qay biyay qaysas barakacayaal ah oo ku nool xarada barakacayaasha dad ka soo baracay ee ku noo kaam silig ee magaalada garoowe.
Deeqda gar gaarka ah ee ka mid dowlada dalka kuway ayaa waxaa ay ka koobnayd raashiin iskugu jira :bur,basiir,sonkor,caano iyo Timir oo loo qaybiyay qaysas ka barakacayaasha ee ku nool kaamamka dadka soo barakacay ee magaalada garoowe.
Gar gaar kaasi maanta la gaar siiyay dadka ku dhaqan kaam silig ee magaalada Garoowe ayaa waxaa ay is toos ah ugu timid Jimciyatu xayaa turaab oo sal dhigeedu yahay dalka kuwayt iyadoona ay gacan ka gaysteen deeqda maanta la soo gaar sii yay dadka barakacayaasha ku ah ee ku nool magaalada garoowe ay wax ka soo Aruuriyeen shacagka reer kuwayt.
Deedaayawaxaa qaybinaysay hay’ada daryeelka bulsha Puntland oo ay u soo wakiisheen jimciyada xayaa u turaab oo hay’ada soo dhiibtay gar gaar ka waxaana sbc ugu warmay agaasime ku xigaynka hay’ada daryeelka bulshada Puntland muuse saciid jeelle oo sheegay in ay gar gaar ka uu ka yimid dalka kuwayt ayna u qaybiyeen dadka barakacayaasha ah ee ku nool xarada kaam siliga ee magaalada garoowe waxaana uu sheegay in deeqda ay ka kooban tahay Raashiin iskugu jira :bur,bariis,sonkor,caano iyoTimir isla markaasina ay gaar siiyeen 200oo qays oo barakacayaal ah kana soo barakacay gobalada koonfurta soomaaliya oo ay abaaraha ku dhufteen .
Dadka maan la gaar siiyay deeqda gar gaar ka ah ayaa ka mahad celiyay iyadoona ay deeqda bixinaysay hay’ada daryeelka bulshada ee Puntland loo wa kiishay inay gaar siiso dadka tabaalaysan ee gar gaar ka u baahan.
Gar gaar ay soo dhiibtay dowlada dalka kuwayt ee maanta la sii yay qaysas ku tababaalaysan barakacayaal ah ee ku tabaalaysan ee magaalada garoowe ayaa ka dambaysan ka dib markii dhawaan uu booqasho uu ku yimid garoowe madaxa jimciyada xayaa u turaab dalka kuwayt u qaabilsan afrika sheekh jaazim oo ku lamo la qaatay madaxda Puntland.